Budata PCKeeper Antivirüs maka Windows
Budata PCKeeper Antivirüs
Free Budata maka Windows (0.61 MB)
Budata PCKeeper Antivirüs,
PCKeeper Antivirus bụ mmemme antivirus a pụrụ ịtụkwasị obi ma dịkwa egwu nke ị nwere ike iji chebe kọmputa gị pụọ na nje na trojans na -emerụ ahụ site na mpụga. Ị nwere ike iji ụdị nnwale nnwale mmemme a, ekele maka ịdị nfe ya, ọ naghị ada mbà kọmpụta gị, ị nwere ike chefuo na ọ na -agba nokirikiri.
Mmemme a, nke na -emelite nchekwa data nje ya oge niile, na -echebe gị pụọ nihe egwu niile dị nịntanetị. Ngwanrọ a, nke ị nwere ike ichedo pụọ na igwu wayo ịntanetị, nke mụbara nafọ ndị na -adịbeghị anya, na -enye gị ohere ịkpachara anya megide ihe egwu ị nwere ike izute mgbe ị na -achọgharị ịntanetị. Yabụ, ịnwere ike iji ịntanetị nenweghị nsogbu dịka ịchọrọ.
Agbanyeghị na ọ dị iche na ahụmịhe kọmputa gị, ọbụlagodi na ị bụ onye ọrụ kọmputa nwere ahụmịhe, enwere ike iduhie gị site noge ruo noge. Maka nke a, m na -eji kọmpụta mara mma nke ukwuu anaghị ekwu na amaara m ihe niile, na iji ụdị mmemme a ga -echebe gị mgbe niile. Dịka ọmụmaatụ, ruo afọ ole na ole gara aga, ejighị m mmemme antivirus ọ bụla. Mana agbanyeghị na enwetaghị m ihe merenụ ọ bụla, amalitere m iji ya site nịghọta na m ga -eji ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ mmemme antivirus ị nwere ike iji, ị nwere ike budata wee nwalee PCKeeper Antivirus nefu. Ọ bụrụ na afọ juru gị, ị nwere ike ịga nihu na -eji mmemme ahụ site na ịzụrụ ikike.
Mgbe izizi wụnye mmemme a, a na -enyocha kọmputa gị niile na akpaghị aka ma ọ bụ ehichapụ faịlụ ndị ahụ dị ize ndụ. Yabụ, ị nwere ike wepu faịlụ niile na -emerụ ahụ na kọmputa gị.
Site na nkwado ndụ na ngwa ahụ, ị ​​nwere ike nweta nkwado ndụ 24 awa ụbọchị, ụbọchị asaa nizu. Yabụ, ị nwere ike ịkpọ akara nkwado ndụ noge ọ bụla maka nsogbu ndị ị na -enweghị ike idozi onwe gị. Ihuenyo nkwado ndụ na-anọchi dị ka menu mmapụta nakụkụ aka nri nke mmemme ahụ. Ị nwere ike ime ka mmemme mmemme pere mpe site na imechi ya mgbe ị chọghị ya.
Site na mmụba nke mwakpo na ịntanetị, enwere m ike ịsị na PCKeeper Antivirus, nke bụ otu nime mmemme ekwesịrị ịchọta na kọmpụta ọ bụla, bụ ezigbo ntụkwasị obi ma na -arụ ọrụ nke ọma.
PCKeeper Antivirüs Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.61 MB
McAfee Rootkit Remover bụ ngwa na -aga nke ọma nke na -enyere ndị ọrụ aka ịchọpụta ma hichapụ...
Gịnị bụ Tor Browser? Tor Browser bụ ihe nchọgharị intaneti a pụrụ ịdabere na ya maka ndị ọrụ...
Bitdefender Antivirus Free bụ otu nime mmemme antivirus kachasị dị irè ị nwere ike iji nefu na...
Chebe Disk m bụ sọftụwia nchekwa efu na -enye gị ohere ichebe mkpanaka USB na kọmputa gị pụọ na nje...
Avast Free Antivirus, nke na-enye sistemụ nchedo virus anaghị akwụ ụgwọ maka kọmputa ndị anyị jiri...
Njikwa Firewall Windows bụ obere ngwa na -agbatị arụmọrụ nke Firewall Windows ma na -enye gị ohere...
Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ngwa ịgbawa Apple ID paswọọdụ ma ọ bụ ịgbawa iPhone ihuenyo mkpọchi...
Ngwa maka ịchọpụta ụdị mmemme Keylogger nke na -eme ka ị chekwaa data etinyere na keyboard wee...